Ku dhawaad 200 oo askari oo ka goostay ciidanka Somaliland ee gobolka Sanaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKu dhawaad 200 oo askari oo ka goostay ciidanka Somaliland ee gobolka Sanaag
Ku dhawaad 200 oo askari oo ka goostay ciidanka Somaliland ee gobolka Sanaag
May 28, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Ciidamo katirsan Somaliland. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 200 oo askari iyo taliyeyaashooda ayaa ka goostay ciidanka Somaliland ee gobolka Sanaag, sida ilo-wareedyo madax-banaan ay u xaqiijiyeen bog wareedka Puntland Mirror.
Ciidamadan goostay ayaa maamulka Somaliland u qaabilsanaa deegaano kuyaala gobolka Sanaag.
Saraakiisha hoggaaminayasa ciidanka goostay iyo taliyaha guud ee ciidamada maamulka Somaliland ayaa khilaaf weyn soo kala dhexgalay, taasoo sababtay goosashada, sida ilo-wareedku ay sheegeen.
Lama oga ilaa iyo hadda halka ay aadeen ciidanka goostay, oo wata gaadiidka dagaalka.
Arrintan ayaa imaanaysa iyada oo gobolka Sanaag asbuucyadii u dambeysay ay ka taagnayd xiisad u dhaxeysa Puntland iyo Somaliland.
Dhawaan, ciidamo katirsan maamulka Somaliland ayaa weerar gaadmo ah ku qaaday wefdi ka socda Puntland oo uu hoggaaminayay wasiirka waxbarashada. Ugu yaraan lix qof oo ka kala tirsan labada dhinac ayaa ku dhintay weerarkaas gaadmada ahaa oo ka dhacay deegaanka Damala-xagare ee gobolka Sanaag.
Hadda, magaalada Baran waxaa ku sugan masuuliyiin sare oo katirsan Puntland oo uu hoggaaminayo wasiirka amniga Cabdisamad Maxamed Galan.
Saddex maleeshiyo oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay gudaha Puntland
Qaramada Midoobay oo u codeysay in 1,000 askari la dhimo ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya
Ey dilay cunuga madaxweynaha dalka Gambia oo la dilay
Ay dilay cunug yar oo sideed sano jir ah oo uu dhalay Madaxweynaha dalka Gambia Adama Barrow ayaa la dilay, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. Habibu Barrow ayaa ku dhintay isbitaalka kadib markii uu qaniinay [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa subaxnimadii saakay oo Isniin ah madaafiic isku weydaarsaday meel u dhow tuulada Tukaraq ee gobolka Sool, ilo-wareed katirsan ciidamada Puntland, oo codsaday in magaciisa aan la sheegin, ayaa [...]